Trafficgbọ njem ndị njem ka dị ala n'ọdụ ụgbọ elu Frankfurt
Home » Akụkọ ndị ọbịa nke mba ụwa » Ozi Njem na Germany » Trafficgbọ njem ndị njem ka dị ala n'ọdụ ụgbọ elu Frankfurt
Tragbọ njem ndị njem dị ala na ọdụ ụgbọ elu Frankfurt
OVgbọ njem ndị njem na Ọdụ ụgbọ elu Frankfurt na-aga n'ihu na ọrịa na-efe efe COVID-19 na-emetụta ajọ njem
Nnukwu ibu na Frankfurt na-aga n'ihu na-eto eto siri ike
FRA weputara ịrị elu 56.4 ma e jiri ya tụnyere Machị 2020
Fraport's Group ọdụ ụgbọelu zuru ụwa ọnụ na-egosi mgbanwe ọrụ arụmọrụ
Na March 2021, ndị njem na Ọdụ ụgbọ elu Frankfurt (FRA) nọgidere na-enwe mmetụta siri ike nke ọrịa Covid-19 na-efe efe. Ije ozi na ndị njem 925,277 na ọnwa mkpesa, FRA weputara nkwụsị 56.4 pasent ma e jiri ya tụnyere Machị 2020 mgbe mmalite nke nsogbu coronavirus ama belata okporo ụzọ. Ntụnyere na Machị 2019 na-egosi mbelata okporo ụzọ siri ike karị nke pasent 83.5 maka ọnwa mkpesa. N'ime oge Jenụwarị-ruo-Machị 2021, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nde mmadụ 2.5 njem site na FRA. N'iji ya tụnyere oge mbụ nke afọ abụọ gara aga, nke a na-anọchite anya mbelata nke 77.6 pasent na 83.2 pasent megide 2020 na 2019, n'otu n'otu.
N'ụzọ dị iche na nke a, na-ebugharị ibu na FRA site na 24.6 pasent kwa afọ ruo 208,506 metric tọn n'oge Machị 2021 (karịa 3.0 pasent ma e jiri ya tụnyere Machị 2019). Enwetara uto siri ike Frankfurt n'agbanyeghị ụkọ afọ na-aga n'ihu nke ike ụgbọelu na-enyekarị. Movementsgbọ elu na-ebelata site na 40.1 pasent kwa afọ na mbido 13,676 na ọdịda. Mkpokọta buru ibu buru ibu (MTOWs) jiri 30.3 pasent ruo ihe dịka 1.1 nde metrik tọn.
Ọdụ ụgbọ elu dị na FraportPọtụfoliyo mba ụwa gosipụtara nsonaazụ agwakọtara maka Machị 2021, ebe ndị njem na-enwekarị mmetụta metụtara ọrịa na-efe efe na mpaghara ndị ahụ. Fọdụ ọdụ ụgbọ elu Fraport zuru ụwa ọnụ ọbụlagogo uto ma e jiri ya tụnyere Machị 2020, agbanyeghị na mbido ọnụọgụ mbata amatalarị n'ọnwa ahụ. Ọ bụrụ na e jiri ya tụnyere Machị 2019, ọdụ ụgbọelu niile edebanyere aha ndị njem na -adịghị anya na ọnwa mkpesa.
Ọdụ ụgbọ elu Slovenia nke Ljubljana (LJU) hụrụ ka okporo ụzọ dara site na 78.3 pasent kwa afọ na ndị njem 7,907 na Machị 2021. N'ịkọtara, ọdụ ụgbọ elu abụọ nke Brazil nke Fortaleza (FOR) na Porto Alegre (POA) natara ngụkọta nke ndị njem 330,162, gbadaa 57.7 pasent. Gbọ njem na ọdụ ụgbọ elu Lima nke Peru (LIM) dara site na 46.2 pasent na ndị njem 525,309.
Gbọelu ọdụ ụgbọelu 14 nke Grik debanyere ọnụ ọgụgụ okporo ụzọ nke 60.0 pasent kwa afọ na ndị njem 117,665. N'elu ụsọ Oké Osimiri Black Bulgarian, ọdụ ụgbọ elu Twin Star nke Burgas (BOJ) na Varna (VAR) nabatara ndị njem 21,502 na March 2021, na-agbada pasent 46.1. Gbọ njem na ọdụ ụgbọ elu Antalya (AYT) na Turkey jiri pasent 2.1 belata gaa ndị njem 558,061. Ije ozi ihe ruru nde ndị njem 1.1 n’ọnwa a na-akọ, Pulkovo Airport (LED) dị na St. Petersburg, Russia, nwetara uto nke 11.1 pasent kwa afọ. Na ọdụ ụgbọ elu Xi'an (XIY) na China, okporo ụzọ rịrị elu karịa ndị njem 3.4 nde na Machị 2021 - nlọghachi pụtara ìhè ma e jiri ya tụnyere Machị 2020, mgbe ọrịa Covid-19 dakwasịrị China. Mana ọbụlagodi ma e jiri ya tụnyere nsogbu tupu ọnwa Machị 2019, XIY nyere ọnụọgụ azụmahịa nke naanị 9.0 pasent na ọnwa mkpesa.
Mmekorita enyemaka nke Lufthansa: Nkwa maka oru ohuru asaa
SriLankan Airlines CEO na COVID iweghachite na gbasaa ọrụ ibu